Maitiro ekudzidza psychiatry | Kuumbwa uye kudzidza
Yekupedzisira Basa Rekuita
Maitiro ekudzidza psychiatry
Maria Jose Roldan | | Jobho Kubuda
Kuva nehutano hwepfungwa chinhu chakakosha kana zvasvika pakunakidzwa nehupenyu nezvose zvakakomberedza. Nehurombo, kuuya kwedenda muhupenyu hwedu kwakonzera kuti vanhu vazhinji vapedzisire vatambura nezvinetso zvakasiyana zvepfungwa. Ndicho chikonzero nei basa rezvechiremba wepfungwa riri rimwe reanonyanya kudiwa uye rimwe remukurumbira.
Kana iwe uchida zvese zvine chekuita nehutano hwepfungwa uye akasiyana siyana matambudziko anogona kuikanganisa, saka usazeze kudzidza nezvepfungwa.
1 Chii chinonzi psychiatry
2 Ndeapi mashandiro anoita chiremba wepfungwa
3 Marii inogona kurapwa nachiremba wepfungwa
4 Ndeupi musiyano uripo pakati pezvepfungwa nepfungwa
Chii chinonzi psychiatry
Psychiatry ibazi remushonga iro rinoongorora dzakasiyana kusagadzikana kwepfungwa. Iri ibasa revanhu vanoziva kubata manzwiro akasiyana kana kuve nehunhu hwakakodzera, chimwe chinhu chakakosha kana zvasvika pakurarama nenzira yakatendeseka.
Kunyangwe vanhu vazhinji vachifunga kuti Psychiatry idhigirii rekuyunivhesiti senge Psychology iri, chokwadi ndechekuti ivo vari mukukanganisa sezvo pasina dhigirii repayunivhesiti muPsychiatry. Kana iwe uchida kuve chiremba wepfungwa, iwe unofanirwa kuita iyo Chiremba degree iro rinotora makore matanhatu uye kubva ipapo, tora hunyanzvi hwePsychiatry. Izvi zvakasarudzika zvine makore mana. Mukati meiyi hunyanzvi, munhu anogona kusarudza mamwe matavi senge Sexology kana Psychopathology.
Sezvineiwo, munhu ari kudzidza Psychiatry, zviite nenzira yehunyanzvi. Haasi munhu wese akanaka kana zvasvika pakurapa vanhu vakakanganisa hutano hwepfungwa. Kurapa munhu ane chimwe chirwere chepfungwa hakusi nyore uye zvakakosha kuti uve nehunyanzvi hwakawanda hunovabvumidza kudzidzira basa iri pasina dambudziko.
Ndeapi mashandiro anoita chiremba wepfungwa
Chinangwa chikuru chechirwere chepfungwa hachisi chimwe kunze kwekurapa dzakasiyana siyana dzepfungwa kuburikidza neruzivo rwavo rwakawanikwa muzvidzidzo. Pamusoro peizvi, chiremba wepfungwa anodzidziswa kana zvasvika pakuronga mimwe mishonga kuvarwere vake nekuwedzera pakuongorora kwemuviri uye kwepfungwa kwemunhu ari kubvunzwa.
Nyanzvi yezvepfungwa inoshandisa nzira dzakasiyana kubatsira vamwe vanhu vasina hutano hwepfungwa uye semhedzisiro vanotambura nedambudziko rekufanana. Ivo zvakare vakanyatsodzidziswa mukudzivirira uye bata maitiro kana maitiro ekuzvibata.
Marii inogona kurapwa nachiremba wepfungwa
Mubairo unoenderana nekuti nyanzvi inoshandira Hurumende here kana kana, nekusiyana, anozviitira vega kuburikidza nekubvunzana. MuSpain avhareji yemubhadharo wechiremba wepfungwa ndeye 37.000 gross euros pagore. Nhasi zvinofanirwa kutaurwa kuti ibasa rinonyanya kudikanwa nekuda kwekuwedzera kwekushushikana kwepfungwa kwakaitika munharaunda nekuda kwekuuya kwedenda. Uku kuda kunoitika munzvimbo dzese dzinogona kuitika, kungave kune veruzhinji kana vega.
Ndeupi musiyano uripo pakati pezvepfungwa nepfungwa
Nhasi kuchine vanhu vazhinji vanowanzo nyonganisa Psychology nePsychiatry. Kunyangwe izvi zviri zvehunyanzvi zvine zvibodzwa zvakafanana, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yega yega ine hunhu uye misiyano:
Nyanzvi yezvepfungwa iri mukutarisira kwekudzidza maitiro kana maitiro emunhu, nepo chiremba wepfungwa achivavarira kuongorora uye kurapa kwakasiyana kusagadzikana kwepfungwa uko vanhu vanogona kutambura nako.
Mumwe mutsauko mukuru wakakonzerwa nenyaya yekuti chiremba wepfungwa anokwanisa kupa mishonga yakasiyana siyana kuvarwere vake pavanenge vachirapa matambudziko akasiyana epfungwa. Asi, chiremba wepfungwa haagoni kupa mishonga uye iwe unogona chete kushandisa ruzivo rwako pakurapa varwere vako.
Kunyangwe vari mabasa maviri akasiyana, vanogona kubatsirana sezvo murwere angangoda kurapwa kuti vadzorezve maitiro avo uye zvinodhaka kuti ugone kurapa chero rudzi rwepfungwa kusagadzikana kwaungatambura.
Muchidimbu, psychiatry ibasa iro nhasi rine mikana yakawanda maererano nemikana yemabasa. Dambudziko rakakura nePsychiatry nderekuti harisi dhigirii rekuyunivhesiti, asi zvehunyanzvi mukati meMishonga. Naizvozvo, kuti uve chiremba wepfungwa, unofanira kutanga wapedza degree muMedicine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Maitiro ekudzidza psychiatry
Ungave sei purofesa?
Sei kuva mutambi? Matipi matanhatu ekuzadzisa chiroto chako
Gamuchira iyo yakanakisa ruzivo nezve kudzidziswa uye zvidzidzo muemail yako.